Dhimashada on Display? Twitter - Qalab Maareyn cusub oo AP ah | Martech Zone
Dhimashada on Display? Twitter - Qalab Maareyn cusub oo AP ah
Talaado, Agoosto 11, 2009 Axad, Abriil 24, 2016 Ball Lorraine
Waxaan ku jiray xaalad xun shalay maxaa yeelay waxaan ceyrsanayay qaansheegadyo waqtigoodu dhaafay oo aan ka helay seddex macmiil. Waan ciil qabay, oo waxaan u baahday in aan soo daayo, markaa waxaan ku qoray un faallo aan waxba galabsan (oo aan ahayn mid aan waxba galabsan) barta Twitter-ka. Waxaan weydiiyay:
Markuu macmiilku biil bixin waayo oo uu ka gaabiyo wicitaanadaada taleefanka, waa qaab xun in magacyadooda loogu sheego Twitterka?
Jawaabaha aan ka helay saaxiibaday waxay ii sheegeen inay ahayd fikrad xun oo xun, in yar oo dareemay inay waxtar yeelan karto, qaar ka mid ah oo siiyay tixgelin xeel dheer iyo xoogaa fikrado xiiso leh oo isku dhafka ah: Kuwa aan ugu jeclahay:
@wolfems yaa yiri, "Waan jeclahay… Samee Axadda waxayna noqon kartaa tag cusub, SundayShame. Qaabka cusub ee maamulka AP.
In kasta oo aan ka shakisanahay inaan dhajin doono ogeysiisyada DEADBEAT waqti dhow, waxay kicisay su'aalo xiiso leh. Maaddaama internetku ganacsiga ka dhigayo mid hufan, ma ka dhigi doonaa dhammaan macaamil ganacsi daahfuran? Taasina waa mid duulaan ah ama hagaajinta xidhiidhada ganacsiga?
Jawaabta ma haysto, laakiin waxaan jeclaan lahaa jawaab celin. Sideed u aragtaa inaad macluumaad dheeri ah ka dhigto dadweynaha, sideese u isticmaaleysaa Baraha Bulshada maanta si aad taas u sameyso?
Tags: garaacisceebeynta dadweynahaxishoodsuuq-geynta suuqaceebaynta baraha bulshadaTwitterceebayn twitter
Suuqa Sida Hooyo Blogger ah
Agoosto 11, 2009 saacaddu markay ahayd 6:10 PM
Haddii aad fiiriso ururinta noocyada goleyaasha, waxay soo diraan khibrado ay ku kala macaamilaan midba midka kale, kuwaas oo ah macaamillo lacag bixin ah. Hadda, taasi maahan inay isku mid tahay xirfadleyda qaarkood sida 'macaamil ganacsi' run ah, laakiin ganacsiyada qaar ayaa dhacay. Taasina waa sababta ay isla dadkaas waqti ugu qaataan sameynta liisaska 'ganacsatada wanaagsan' oo ay talooyin siiyaan.
Waxaan fiiriyaa qaanuunka dahabiga ah, ku samee kuwa kale wo .waxaan rabaa qof inuu ku qoro wax runti xun magacayga? Maya. Miyaan sameeyaa dhaqammo ganacsi oo adag - Haa. Taas oo ka hortagi lahayd tan gebi ahaanba.
Marnaba kuma talin lahaa inaad qof ama shirkad ku sheegto magac, maxaa yeelay aakhirka waxay ka tarjumaysaa dabeecadaada. Laakiin haddii ay leeyihiin nooc shakhsiyadeed oo internetka ah oo aan ahayn magacooda saxda ah, markaa waxaan u maleynayaa marka si dhadhan leh loo dhammeeyo inay haboonaan karto haddii ujeedadu tahay in laga digo kuwa kale.
Agoosto 11, 2009 saacaddu markay ahayd 6:15 PM
Waxaan u ahay dhammaan digniinta culus marka hore, Lorraine. Wax dhibaato ah kuma qabo bixitaannada dhimashada - illaa iyo inta ay ka warqabaan cawaaqibka. Isku xigxiggaygu wuxuu noqon doonaa emayl> cod> shaqsi ahaan (haddii ay suurtagal tahay)> qareen… ka dibna haddii weli jawaab la waayo = dadweynaha.
Waxaan ku jiraa bartanka bilowga hadda waxaanna haynaa dhowr qaansheegadood oo aad u fiican; si kastaba ha noqotee, waxaan heshiisyo la galnay iibiyeyaasha oo aan bixin karno oo keliya markaan helno maalgelinta maalgashiga. Waxaan rajeynayaa inaanan arki doonin magacayga Axadda loo yaqaan "Deadbeat Sunday" waqti dhow!
Agoosto 11, 2009 saacaddu markay ahayd 2:54 PM
Xaqiiqdii waa ku xadgudub heshiiska bulshada. Dadku waxay filayaan in macluumaadka lacag-bixinta si gaar ah loo ilaaliyo, gaar ahaan marka iyo sida biilasha loo bixiyo.
Si kastaba ha noqotee, waxaad la aasaasi kartaa horraan macmiil inaad daabici doontid dhammaan akoonadooda xogta la bixin karo, wanaag iyo xunba. Tani waxay la mid tahay dooda mushaaraadka qarsoodiga ah - qof kastaa wuu raaci karaa dooda, laakiin bedelida waa mid aad u weyn oo dadka intiisa badani si dhab ah uga fiirsan.
Aug 13, 2009 at 3: 08 AM
Runtii waxaan lashaqeynaa macaamiisha, waxaanna qaadnaa qaansheegta dhowr bilood. Ka ugu dheer wuxuu ahaa macmiil bixiya $ 200 / bishii muddo 18 bilood ah. Waan ku faraxsanahay taas ilaa iyo inta ay ila hadlayaan.
Waxaan u maleynayaa inaanan waligey rabin inaan sidan sameeyo, laakiin qoritaankeeda ayaa iga dhigtay inaan aad u fiicanahay! Waad ku mahadsantahay jawaab celintaada.
Agoosto 14, 2009 saacaddu markay ahayd 3:07 PM
Uma maleynayo in dhajinta liistada macaamiisha garaacista lihi ay waxba qaban doonto - marka laga reebo inay macaamilka ka xanaajiso inuu tallaabo sharci ka qaado. Maxaa intaas ka badan, maahan… ..nice. Dhinaca kale, warqad erey-bixin adag ah oo ka timid qareenkaaga ayaa laga yaabaa inay waxtar yeelato.
Waxaan badanaa u maleeyay inay faa iido leedahay in liisaska "xumaanta / fiican" laga helo saaxiibbada warshadaha si aan uga fogaano inaan shaqo u qabanno macaamiisha aan si wanaagsan noola dhaqmi doonin.
Agoosto 14, 2009 saacaddu markay ahayd 3:08 PM
Inaan ahay milkiile ganacsi oo yar oo socodkiisu lacag xadidan yahay, intii aan jeclaan lahaa, ayaan jawaabi doonaa jawaabta Jay. Miyaan ku farxi lahaa markaan arko magacayga oo tweet gareeyay sababtan? Maya. Laakiin, wax dhibaato ah miyaan ku qabaa tweeting ku saabsan khibradaha adeegga macaamiisha (ama aan caadi ahayn)? Maya!
Agoosto 14, 2009 saacaddu markay ahayd 3:09 PM
Sir ka dhig! Maalin maalmaha ka mid ah arrimihu way rogi karaan oo aadan rabin inaad gubto buundooyinka. Waxaan aaminsanahay in fursaduhu ay yihiin haddii aad ugaarsi ugu jirto lacag bixinta sidoo kale kuwo kale oo badan ayaa jira. Waxaan ogaaday in dadka badankood ay rabaan inay sameeyaan waxa saxda ah oo ay biilka iska bixiyaan. Nasiib darrose, markii mushaharku ka gaabiyo dhinaca lacagta la qaadan karo way ka gaabinaysaa dhinaca la bixin karo oo sidaas ayaa silsiladdu u socotaa. Dhaqaalahani wuxuu ubaahan yahay wacyigelin sare iyo xasaasi ah oo isku dhiibaya inay gacan ka gaysato sidii midba midka kale ganacsigiisu u joogteyn lahaa ilaa aan ka aragno soo noqoshada weyn iyo soo kabashada dhaqaalahan.
Agoosto 14, 2009 saacaddu markay ahayd 4:27 PM
Waxaan shakhsi ahaan dareemayaa in dhajinta macaamiisha ay tahay edeb daro.
waxay ku lahaan karaan sabab sharci ah dhaqaalahan bixinta lacagaha soo daahay tusaale caafimaad, dacwad shaqo la'aan IWM. oo ay ka xishoodaan oo aanad hubin waxa ka dhalan kara xaaladda.
sidoo kale mid waa inuu ka taxadaraa waxaad ku dhajinaysid dadka xanaaqsan.
Waxaa la iga ceyriyey 7 sano ka hor shirkad weyn oo halkan ku taal waxaanan hadda ogaaday in maareeyihii hore ee shirkaddaas uu leeyahay akoon twitter ah oo uu soo qoro qoraalo been abuur ah oo nacayb ka buuxo oo ku saabsan ME mana hubo sababta?
Agoosto 15, 2009 saacaddu markay ahayd 7:35 PM
Xaaladda lebenka iyo hoobiye, miyaanay taasi la mid ahayn dhajinta jeegga qof ee ka sarreeya diiwaanka? Dhinaca kale, waxay kuxirantahay dhagaystayaasha, waxay u adeegi kartaa inay ka dhigto boodhadhka mid u xun sida garaacista, mana doonaysid taas.
Waxaan ka tagi lahaa ceebta dadweynaha. Had iyo jeer waxaa jira Warbixinta Ripoff.
Aug 16, 2009 at 12: 17 AM
Dadka dibadda jooga ee kugu leh lacag waxay qabataa saddex waxyaalood:
1. Waxay ku tusaysaa inaan lagu aamini karin inaad si caqli gal ah ugu maamusho xaaladaha adag.
2. Haddii macmiilkaagu uu la kulmayo dhibaatooyin, boostadaadu waxay dili kartaa isku daygooda ah inay lacag ururiyaan ama ay helaan heshiiska lacagta ku siinaya.
3. Adoo ka baxaya macmiilkaaga, waxaad u diraysaa calaamadda macaamiisha mustaqbalka inaad kula dhaqmi doontid si isku mid ah.
Waa inaad dadka ka maqnaataa oo keliya marka aad go'aansato inaad maxkamad la tiigsato. Xiriirka waxaa lagu toogtay bartaas.
Agoosto 16, 2009 saacaddu markay ahayd 3:14 PM
Sida had iyo jeer waqtigeygu ku qaatay akhriska Doug qoraalkiisa wuxuu cadeeyay maalgashi wanaagsan waqtigeyga. Dhammaanteen waxaan la xiriiri karnaa mowqifkiisa, kaasoo aan soo marin labada dhinacba, waana wax aan raaxo ku aheyn inuu labada boos midkoodna ahaado.
Waxyeello ah kuma gaarin hawenkaaga waxaanan ku helay inaad kicisay jawaab dheeri ah, dhammaantoodna muujiye, intii aad filaysay.
Aniga ahaan, Mudane Karr, tani waa tusaale kale oo ah xoogga iyo qiimaha dhabta ah ee dhexyaala Yarada Yar Indiana… waa in aynaan marnaba ka waaban ama aan dhayalsan sida ku haboon ee fikradaheena hada ay u noqon karaan soo saarida aragtiyada ka imaaneysa asxaabta la aqoonsan karo iyo kuwa sida wanaagsan loola dan leeyahay.
Jawaabe kasta oo halkan jooga wuxuu ku daray waxyaabo faa iido leh markaan sidaas samaynayeyna waxay mar labaad ii oggolaadeen inaan adduunkayga ku weyneeyo macluumaad aniga oo igu taajiraya si aad u ballaadhan anigoo sii muujinaya dabeecadooda iyo caqligooda iyo mar kale soo bandhigaya tusaale sida ay u qiimo badan tahay ilaha yar ee Indiana kuligeen.